Flatpak 1.3 သည် Linux စနစ်များအတွက် Nvidia devices များစွာဖြင့်ထောက်ပံ့မှုပေးသည် Linux မှ
Flatpak 1.3 သည် Linux system များအတွက် Nvidia ထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်ထောက်ပံ့မှုပေးသည်
လူးဝစ်လိုပက်ဇ် | | ဖြန့်ဝေ
အဆိုပါ Flatpak developer တစ် ဦး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Linux package များကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အတွက်သင့်ကိရိယာ၏မတည်မငြိမ်ဗားရှင်းအသစ်နောက်လာမည့်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်သော Flatpak 1.4 ကိုကြည့်ရန်။
Flatpak 1.3 သည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပန်းတိုင်သစ်တစ်ခုသတ်မှတ်ရန်ဤနေရာတွင်လာသည်။ Flatpak 1.4 သည်နောက်ထပ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီး၊ မျိုးစုံ Nvidia devices များနှင့်အတူစနစ်များများအတွက်ထောက်ခံမှု.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Flatpak 1.3 သည် sandbox တွင်ကန ဦး dconf အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်, –no-update- [summary, appstream] နှင့် –static-delta-ignore-ref = PATTERN ဟုခေါ်သော build-update-repo command အတွက်ရွေးချယ်စရာအသစ်နှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ appstream ၏အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်းအားဖြင့်ရှည်လျားသော repositories အတွက်အထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်စေသည်။
ဖော်ပြသင့်သောအပြောင်းအလဲများတွင် Flatpak 1.3 သည် Gentoo ကဲ့သို့သော / var / run သည် symlink ကဲ့သို့သော Linux system များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ရှိသည်။ SVG ပုံရိပ်များ၏အရွယ်အစားကို icon validator ကအကန့်အသတ် မရှိ၍ update output ၏စစ်ဆေးမှုများလှည့်သွားသည်။ နောက်တဖန်စိမ်း
တနည်းကား, Flatpak 1.3 သည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသော release ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တည်ငြိမ်သော release အတွက်အချို့သောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်အာရုံစိုက်သည်Flatpak 1.4 ကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်များတွင်တပ်ဆင်။ မရပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင် Flatpak 1.4 ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို၊ အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများ၊ developer များနှင့်စိတ်အားထက်သန်သူများသည်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်လာမည့်အရစ်ကျလာမည့်အပြောင်းအလဲများနှင့်သတင်းများကိုအတိုချုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Flatpak 1.3 သည် Linux system များအတွက် Nvidia ထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်ထောက်ပံ့မှုပေးသည်
Persepolis - အခမဲ့ပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှ download manager
Debian DPL အသစ်ဖြစ်ရန်မည်သူမျှမလျှောက်ထားလိုပါ